के तपाई धित मर्ने गरि रूनु भएकाे छ ? यस्ता छन् रूनुका फाइदाहरू — Sanchar Kendra
एजेन्सी । हामी कुनै न कुनै समयमा राेइरहेका हुन्छाैं । कसैले चित्त दुखाउँदा वा कुनै काम बिग्रिएर समस्यामा पर्दा हामीले रूने गरेका छाैं । हामी रूनुकाे मूख्य कारण भनेकाे हाम्राे चित्त दुख्नु हाे । चित्त दुखेपछि हामी रूने गर्छाैं र आँखाबाट आँसु झर्ने गर्छ ।
सुखका हाेस् वा दु:खका कुनै पनि कुरा गरिरहँदा पनि भावनामा डुबेर आँसु झारिहाल्छन् । महिला हाेस् वा पुरूष भावनामा डुबेपछि आँसु झर्नु स्वाभाविकै हाे । कतिपयले रूनु हुँदैन, रूँदा स्वास्थ्यमा समस्या पैदा हुन्छ भन्छन् तर रूनुका केही फाइदा पनि छन् ।
जो व्यक्ति रुन्छन्, त्यस्तालाई कहिल्यै पनि कमजोर सोच्नुहुँदैन । यस्ता व्यक्ति यो सोच्दैनन् कि सबैको अगाडि रुँदा अरुले के सोच्लान ? न त उनीहरु आफूलाई कमजोर नै ठान्छन् । जो एक राम्रो बानी हो ।
भनिन्छ कि रुनु तनाव भागउने सबैभन्दा उत्कृष्ट उपाय हो । यदि तपाई तनावमा हुनुहुन्छ र त्यसलाई दूर गर्न सकिरहनु भएको छैन भने तपाईको मनमा नकरात्मक कुराले बढी स्थान लिन्छ ।
जसका कारण तपाईं विभिन्नखाले रोगको चपेटमा पनि आउन सक्नुहुन्छ । यसकारण तनावका बेला केही समय रुनुहोस्, जसले तपाईको मन हलुको हुनेछ ।
तन र मन स्वस्थ राख्नका लागि पनि हामी कम्तिमा पनि सातामा एक पटक रूने गर्नु विज्ञानकाे दृष्टिले राम्राे मानिन्छ । तर अति गर्दा खति हुन्छ भने जस्तै रूँदा पनि ठिक्क मात्रामा रूनु पर्छ । अत्याधिक राेयाे भने मानसिक रूपमा हानि पुग्छ र झन् तनाव थपिने सम्भावना रहन्छ ।